Daawo Goos Gooska iyo Sawirada England oo u xoog sheegatay Sweden iyo Kane oo aan Gool dhalin | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Goos Gooska iyo Sawirada England oo u xoog sheegatay Sweden iyo Kane oo aan Gool dhalin
(07-07-2018) Xulka qaranka England ayaa u soo baxay afar dhamaadka koobka aduunka kadib markii ay si xarago leh u tumeen dhigooda Sweden. Muddo rubuc qarni ku dhawaad uu xulka England ka maqnaa afar dhamaadka koobka aduunka waxay ugu danbayn u muuqdaan kuwo hadda ka mid noqday xulalka koobka aduunka ku guulaysan kara.
Goolka furitaanka ee muhiimada wayn u lahaa England waxaa u dhaliyay Harry Maguire laakiin Dele Alli ayaa goola lbaad ugu quus gooyay Sweden waxayna Three Lions hadda sugi doonaan kulanka Russia iyo Croatia oo ay midkii soo guulaysata afar dhamadka koobka aduunka kula ciyaari doonaan.
Xulka England ayaa afar dhamaadka koobka aduunka u soo baxay markii saddexaad oo kaliya waxayna hore u soo gaadheen wareegan 1966 kii oo ay koobka ku soo guulaysteen halka markii labaad ay ahayd 1990 kii oo ahaa markii ugu danbaysay ee ay afar dhamaadka soo gaadheen.
Kaydka: Jack Butland, Nick Pope, Gary Cahill, Danny Rose, Jamie Vardy, Ruben Loftus-Cheek, Fabian Delph, Eric Dier, Phil Jones, Danny Welbeck, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold.
Kaydka: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Martin Olsson, Gustav Svensson, Filip Helander, Pontus Jansson, Oscar Hiljemark, Marcus Rohden, Jimmy Durmaz, John Guidetti.
DAQIIQADII 30 AAD Xulka England ayaa la yimid goolkiisa furitaanka kadib markii uu difaaca wacdaraha ka dhigaya koobka aduunka ee Harry Maguire uu gool madax ah ku dhaliyay kubbad uu Ashley Young ka soo tuuray koorne, wuxuuna Maguire ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Three Lions hogaanka ciyaarta kula wareegeen.
Sideed gool oo ka mid ah 10 kii gool ee uu xulka qaranka England ka soo dhaliyay koobka aduunka ayaa ahaa kuwo ku yimid kubbadaha sare ee aan ciyaarta furan ahayn ama rekoodhayaasha waana boqolkiiba 80% goolashii ay soo dhaliyeen.
Xulka qaranka Sweden ayaa bilaabay in ay si xoogan u raadiyaan goolka barbaraha balse sidoo kale England waxay ku hamiyayeen in ay keensadaan goolka labaad si ay ciyaarta maamulkeeda si buuxda gacanta guu dhigaan.
Raheem Sterling ayaa xulka qarankiisa England ka lumiyay fursado cadaan ah oo uu ugu yaraan ku dhalin karayay goolka labaad gaar ahaan waxa uu si toos ah goolka Sweden kubbada ugula baxay dhamaadkii qaybtii hore laakiin waxa uu awoodi waayay in uu kubbada shabaqa gaadhsiiyo.
England ayaa qaybtii hore gacanta sare ku lahayd kubbad bixinta, boosishanka iyo waliba natiijada taas oo si wayn u farxad galinaysay jamaahiirta Three Lions ee natiijada fiican kulankan ka filayay waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 uu xulka England hogaanka ku hayay isla markaana uu culaysku Sweden ku saarnaa.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu xulka Sweden soo laabtay isaga soo doonayay in ay ciyaarta ku soo laabtaan isla markaana ciyaartoyda la soo siiyay dardaarankii ugu danbeeyay ee ay doonayeen in ay xaalada ku badalaan.
DAQIIQADII 47 aad Xulka Sweden ayaa helay fursad cajiib ah oo ay goolka barbaraha ku keensan kareen kadib markii uu Berg sare uga dheeraaday Ashley Young isla markaana uu ku dhawaaday in uu goolkan dhaliyo laakiin goolhaye Jordan Pickford ayaa tayadiisa ku soo bandhigay si uu xulkiisa natiiada ugu ilaaliyo.
DAQIIQADII 58 AAD Xulka qaranka England ayaa la yimid goolka muhiimada wayn u lahaa ee ay xaalada ugu sii xumeeyeen Sweden oo ay cadaadis badan kala kulmayeen waxaana goolka labaad u saxiixay Dele Alli kaas oo caawin aad u fiican ka helay Jesse Lingard, waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Three Lions hogaanka ugu dheeraysteen.
DAQIIQADII 65 AAD Tababaraha Sweden ayaa hal mar laba isbadal wada sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay J. Guidetti iyo Martin Olsson isaga oo saaray O. Toivonen iyo E. Forsberg wuxuuna doonayay in xulkiisu ay meel fog ka soo dagaalamaan.
DAQIIQADII 72 AAD Goolhaye Jordan Pickford ayaa badbaadin kale oo cajiib ah sameeyay kadib markii uu Berg uu fursad gool dhalin muhiim ah ku helay xerada ganaaxa laakiin Sweden ayaa markan aragtay Pickford oo aan si sahlan lagu garaaci karin.
Wax walba oo uu xulka qaranka Sweden iskugu dayay in uu la yimaado goolal waxa joojiyay Pickford oo kulan cajiib ah qaatay waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 2-0 ay Three Lions kaga soo talaabsadeen Sweden isla markaana ugu soo baxeen afar dhamaadka koobka aduunka.
Kulanka caawa ee Russia iyo Croatia midkii soo baxa ayay xulka England wada ciyaari doonaan afar dhamaadka koobka aduunka iyada oo riyadii England ee koobka aduunku xaqiiqo buuxda u muuqanayso.